Ehla Sweet: indlela ukupheka donuts
Donuts kukhona isiyingi, kodwa kwesinye isikhathi umgodi phakathi, amnandi ophaya, okuthosiwe ngo inqwaba uwoyela. Lokhu dessert ngokuvamile enziwe ezihlukahlukene ofakwe ezifana ujamu marmalade noma ukhilimu, abafafazwe Uqweqwe phezu kwalo, abafafazwe ushukela oluyimpuphu noma sprinkles, isibonelo, amantongomane oqoshiwe. Kodwa indlela ukupheka donuts, ngakho baphenduka emoyeni? Ngenxa yalesi labapheki abanolwazi batusa besebenzisa ufulawa okufudumele gluten okuqukethwe hhayi ngaphansi kuka-27%, imvubelo fresh kuphela perekalonny amafutha okumsulwa ukuthosa. Ngaphezu kwalokho, inhlama siphelile akufanele ngaphansi noma yiziphi izinguquko lokushisa.
Cabangela izindlela ezimbalwa ukuthi ukupheka donuts ekhaya.
1. Donuts ne apula ukhilimu
Izithako: amagremu amakhulu amathathu namashumi amabili kafulawa, ithisipuni elilodwa imvubelo, eziyikhulu amagremu yamanzi, anamanci osibhozo amagremu ibhotela, ezintathu amaqanda izikhupha, ayisikhombisa amagremu ushukela, eyodwa iphakethe of vanilla, usawoti ukunambitha. Ukuze ukhilimu: amahabhula amane, eziyikhulu amagremu ushukela, ithisipuni elilodwa rum uma uthanda, nesinamoni.
Ngaphambi ukupheka donuts, kubalulekile ukuncibilikisa imvubelo emanzini, bese ufaka isigamu iphawundi ufulawa, usawoti uphehle konke ubebushelezi. Inhlama ikhava ngendwangu futhi zaba amane imizuzu endaweni efudumele indawo, futhi uma okungukuthi efanelekayo, liyanezela vanilla, ibhotela noshukela, futhi kahle wayixova. Khona-ke ubekwa emuva endaweni efudumele ukuze wandise ivolumu.
Phakathi naleso sikhathi, emahhabhula sihlanza uthathe tincetu futhi abeke endishini, ushukela, inani elincane lamanzi kanye umpheki, govuza njalo, kuze kube mass alube. Ostuzhivayut okuholela mass ngesiswebhu in a blender kanye nesinamoni rum.
Inhlama sehlukaniswe izingcezu, iphuma eyodwa isilinda futhi Imi ku encane izicucu. Donuts Are okuthosiwe ngamafutha ukusabalala on indwangu ukususa yamafutha amaningi. Ngosizo esikhwameni khekhe nge ukhilimu egcwele donuts ke ufafaza nabo nge ushukela oluyimpuphu.
2. Indlela ukulungiselela donuts luphuzi
Izithako: omunye ingilazi yamanzi nofulawa, izingalo eziyikhulu namashumi amagremu ibhotela, ezine amaqanda, imifino namafutha okuthosa.
Izitsha is wathela amanzi, yengezwe ibhotela esithambile futhi eliwu abilayo. Khona-ke add ufulawa, mix kahle futhi baba phezu komlilo kuze kuze inhlama ngeke unamathele kuso. Khona-ke add amaqanda eyodwa ngesikhathi, eshukumisayo kahle.
Nge Batter spoon ukusabalala emafutheni esishisayo futhi ethosiwe kuze yegolide umbala. donuts Iphele ezibekwe phezu a napkin ukususa amafutha ngokweqile.
3. Indlela ukwakheka donuts kusukela ushizi
Izithako: yikhulu amagremu of ushizi, amagremu ezingamakhulu amabili ufulawa, ababili wezipuni ushukela, eyodwa egg, isigamu spoon elincane baking soda nosawoti.
Cottage shizi, usawoti kanye baking soda, zamaqanda noshukela mix kahle, uzengeze kafulawa wayixova inhlama, okuvela kulo ke iphuma ayi kanye isikhunta izindandatho. Lezi izindandatho ezibekwe kule amafutha hot gazinga. Ready donuts ukusabalala on a napkin. Lapho selehlile, ufafaze ushukela.
4. Indlela ukupheka donuts imvubelo
Izithako: ezine wezipuni kafulawa, isigamu spoon ushukela, amagremu amahlanu e-imvubelo, eziyishumi amagremu ibhotela, ayisikhombisa amagremu ubisi, isipuni esigcwele brandy.
Esikhathini ubisi olufudumele, imvubelo buhlanjululwe, ushukela. Uma ubona cap okuthiwa kanye ubisi is batheleka endishini ufulawa, engeza bhotela elicibilikile, usawoti, ugologo uhlanganise kahle. Inhlama ishiywa ukuma ngokulala ihora elilodwa, kangangokuthi. Khona-ke ikhishwa bese usika imibuthano usebenzisa inkomishi. Donuts oshiywe imizuzu amabili bese ethosiwe in abilayo uwoyela.
Ngakho, kulungiselelwa lokhu yokusaswidi efana donuts, akunzima kakhulu futhi ukunambitheka ongenakulibaleka akuthathi isikhathi esiningi uyakwazi ukujabulisa izingane nje kuphela kodwa futhi abadala. Ngakho-ke ama-donut namuhla athandwa kakhulu ehla amnandi.
Dessert esihlwabusayo nge raspberry
Ungakha kanjani ubuhlobo nomama wakho? Umama nendodana. Umama nendodakazi endala. Iseluleko sengqondo